Indlela yokukhetha ubucwebe
Kwakhona, njengokwenziwe, ubucwebe bubonisa umahluko phakathi kobomi bakho kunye noluntu. Kukuncedwa ngamacici, amasongo kunye namasongo, umfazi uyacacisa kwabanye ukuba ungubani nanamhlanje kunye noko kusekwe. Siza kufumana indlela yokukhetha iigugu kunye noko ufuna ukukwazi malunga nale mveliso.
Khetha ubucwebe kwizinto ezihlukeneyo, kodwa ufana nesitayela.
Ukudibanisa ekuboneni kokuqala kubonakala kungahambelani nezinto - iindandatho ezivela kwizinto ezahlukeneyo, kodwa isitayela esinye. Ngokomzekelo, unokubeka isandla esinye isandi esiyinkimbinkimbi, esineemeralds ezincinci, kwaye kwenye - efanayo, kodwa ngeerbies. Amakhonkco amancinci athile afana nesimo esifanayo, ngakumbi xa ayenziwe ngegolide ehlukileyo.
Umhlobiso omuhle ubonakala ngcono ngakumbi kumfazi ngaphandle kokuba.
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba ukuzama ukuhlobisa, kufana nefestile, umfazi uyaqonda ukuba akayi kuye. Emva koko baqala ukutyelela imbono yokuba into ephosakeleyo ngentamo yakhe, izandla okanye iminwe. Kodwa oku akunjalo! Musa ukulibala ukuba uhle, kwaye akukuthi ngawe nonke, kodwa kwintengiso. Imihlobiso emihle igxininisa kwaye ukhanye kuphela kwimvelaphi yakho. Amasongo e-Charming, amasongo kunye namacici anika umhlaba wokudibanisa.
Inyaniso yokuba iingubo zebhinqa zibukeka zingcono kunokuba zingenazo, ingumqondiso omkhulu wokuhlobisa. Ngokukhawuleza xa ibhinqa libeka isandla, libonakala lingabonakali, liba yinto enhle kwaye iyingxenye yomnini wayo kunye nokuqhubeka kwayo ngokuvisisanayo. Ngoko ke kufuneka uqonde ukuba awuzange uphoswe ngokukhetha kwakho.
Ukukhetha iingubo ezintsha, ziphulaphule kunye nomoya wakho. Musa ukuhlala ukhetha iingubo zohlobo olulodwa, kuba namhlanje unokuba yothando kunye nobumnene, nangomso - ishishini kunye nenjongo. Umfazi uyingqayizivele yokutshintsha, ngoko ke, kwi-arsenal yakhe, kufuneka abe ne-enamel iintyatyambo, ezixutywe ngamatye anqabileyo kunye neendandatho zegolide ezincinci. Emva kwakho konke, okokuqala, iimvakalelo zakho zibalulekile, kungekhona imfashini.
Zama ukufunda izithethe zamandulo zobungcweti bezobugcisa.
Okukhethiweyo akufanele kube yinto engacabangiyo. Ukuphupha kwendandatho ngedayimani, ungakulibala ukuba "abahlobo abakhulu" bamantombazana bayijikelezwe ngamaqhinga kunye neengcamango. Khawubale yonke into ebeka phezu kwakho imizekelo evela kwiimaphephancwadi, uze ufikelele kwiimfihlelo zezindlu ze-antique zegolide. Kubalulekile ukwazi, umzekelo, ukuba kukho ifomu elifanelekileyo le-earring - liyingqonge "ye-shield" yeadayimani eline-ruby eyahlukileyo phakathi, isafire, i-emerald okanye elinye ilitye elixabisekileyo. Le fomu idluliselwe kuthi kwizinto ezimnandi zekhulu le-15. La manqaku ku-Renaissance agxininiswe kwiimpawu zentsimbi emnandi kunye neendlebe.
Amacici athatyathwa njengento enxibe kakhulu. Bakhangela ingqwalasela elukhuni entanyeni, kunye neentambo-kwaye ezi ziindawo ezimbini ezinobunzima bomzimba wesetyhini.
Kungakhathaliseki ukuba umfazi useofisini emsebenzini okanye kwi-reception yelizwe, kubalulekile ukuba athathe ingqalelo kuye. Iindleko zobucwebe kumfazi kufuneka zibonakala zikhulu kunokuba zikhona. Ngoko ke, ejikelezwe iadayimani, amabhonkethi e-classics kunye ne-emeralds okanye ama-sapire aya kulungeleka nanini na phantsi kwayo nayiphi na ingubo. Ubuninzi bezinto zokugqoka kunye nokuzilungisa kuyintsebenzo yakho yokukhuphisana. Kule meko, ayikwazi ukuchitha ixesha okanye imali engenalutho-imali yakho.
Musa ukwesaba ukugqoka iingubo ezibi kakhulu ngosuku.
Yazi ukuba igolide okanye amacici amade ayithethi kuyo yonke into yokuba ihlwaya. Kwaye idayimane ayinakuguga kuphela kwimibutho. Ngokomzekelo, idiksi enkulu ebalulekileyo yegolide elimhlophe, elihlotshiswe ngeadayimani, nangaliphi na ixesha lemihla liya kukubumba kwaye lihombise nantoni na.
Iingubo zemihla ngemihla kungcono ukhethe iigugu zobungakanani obukhulu.
Iimpawu ezifanelekileyo ezifanelekileyo, ezenziwe ngobunxibi beevenkile ezineemveliso zamatye. Yaye nayiphina i-t-shirt okanye i-cardigan iza kukwazi ukugxininisa ubuhla benziwe ngezinto zemvelo - isikhumba senyoka, iimpondo, ukhuni, i-hematite kunye ne-onyx. Ziyamelana ngokupheleleyo kunye kunye nemveliso eyenziwe ngesiliva.
Uyilo olukhethiweyo lwemveliso yesitayela somsebenzi.
Ngaphantsi kwengubo yoshishino lomfazi wamashishini wanamhlanje kwaye uphumelele, iingubo zegolide ezenziwe ngefowuni ezifanelekileyo ziya kuhambelana. Amakhonkco amakhulu aya kukwazi ukugxininisa ukwaneliseka, inkululeko kunye nokuzimisela komnini wabo.
Hlalani nicinga ngemigangatho yezinto zokugqoka iimpahla-iingcamango.
Kubalulekile ukukwazi ukwahlula imihlobiso yamantombazana amancinci kunye nabasetyhini abaneminyaka yobudala. I-Pearl, umzekelo, umhlobiso wemini ebiza, ukugxininisa imeko. Ngokungafani neeparele ezimnyama, ezona zibonakalise kwaye zinobudlova, umhlophe ngumzimba wobunqunu. Nangona kunjalo, amantombazana amancinci ayacetyiswa ukuba agweme iintsimbi zeeparele. Emva kwakho konke, yena, enempembelelo enamandla kakhulu, uyabuqabula kakhulu entanyeni nasebusweni, ngoko kuyafaneleka ngakumbi kubafazi abadala. Nangona kunjalo, ngokuthanda iiparele, intombazana encinci inokunikezwa ukuthanda kweengcamango kwaye uxhomeke umsila weparele entanyeni.
Ubungqina obukhulu, ubucwebe obukhulu kwabesifazane abakhulileyo kulungele ukugqoka malunga nomngxuma, ugxininisa isifuba, kunye namantombazana amancinci - aphakamileyo, phakathi kwama-collarbones.
Kukho imihlobiso kunye namaxesha. Iimveliso zasehlobo zifanele zibe lula, zifake umoya, ziphathwe. Bagqoke emzimbeni ukuze ugweme izambatho kwiingubo. Imihlobiso yasebusika yile fom epholileyo kunye neyeyona. Akunamathelisi, ke kutheni bahamba nayo nayiphi na impahla yokubambisana okukhulu.
Ekugqibeleni ndifuna ukuphonsa kwimbali. Ngokomgaqo wamandulo wobuhedeni, imihlobiso kufuneka ifakwe kuphela kwitafile. Kwaye uthabatha ngesandla ulandela izitho zensimbi. Ukuba uthatha iigrafu zamatye, ngoko ke zivela kwaye ziphela.
Yonke imboleko ikulethe uvuyo kunye nemihlali, gxi ninisa, kwaye ubuhle bakho kuphela!
Iyiphi indlela yokubambisana kunye neentlobo zayo?
Indlela yokugqoka ihembe lomntu kwintombazana
Isibambiso samantombazana amfutshane
Izizathu ezikhusela umfazi ukuba angakhuli
Impawu zobudlelwane bezesondo ngexesha elide
I-Cottage ushizi ekudleni kwabantwana
Ingaba indoda ingenasondo?
Iingxowa zepancake kunye nenkukhu kunye noshizi
Unobuncwane kangakanani uKsenia Sobchak kunye nabahlobo bakhe: amalungu okutya kunye nokuqeqeshwa kweqela leSlimBitchClub.
Jam kusuka kwi-zucchini kunye nemon
Ukusetyenziswa kwe-lemon ukulahleka kwesisindo. Ukunciphisa isisindo ngelamula kunye nokusela
Yintoni eyona ncedo olungcono kwi-hangover enzima?
I-Vegetable stew ne-eggplant
Isaladi kunye netyhuna kunye neembotyi
Iintlobo zeeti eziluhlaza kunye nezakhiwo zabo ezixhamlayo
Umrhumo wekhaya wezinwele ze-biolazing